Umzi-mveliso we-Ink-China abavelisi be-Ink, ababoneleli
I-Pigment Yellow 191 / CAS 129423-54-7
I-Pigment Yellow 191 yi-pigment eqaqambileyo etyheli, ekwazi ukumelana nobushushu, ukumelana nokufuduka okuhle, imozulu entle, ukukhanya ngokukhawuleza.
Ukucebisa: Iiplastiki, i-powder coating.
Kucetyiswa ukuba amanzi asekelwe kwi-inki kunye ne-solvent based inki.
I-Pigment Yellow 183 / CAS 65212-77-3
I-Pigment Yellow 183 yibala elibomvu elityheli elinokukhawuleza okugqwesileyo ekukhanyeni nakwimozulu, ngakumbi kwimithunzi enzulu.Inokukhanya okukhanyayo njenge-organic pigment.Njengoko ineempawu ezihamba kakuhle kakhulu kwiipeyinti, ingasetyenziselwa kwiindawo eziphezulu ze-pigment (i-25-30% ye-pigment ehambelana ne-binder eqinile) ngaphandle kokuchaphazela iglosi.Kufuneka kukhunjulwe ukuba ukuchasana ne-alkali enamandla kakhulu awanelisi.
I-Pigment Yellow 180 / CAS 77804-81-0
I-Pigment Yellow 180 yipigment ephakathi-tyheli, enokumelana okugqwesileyo, kunye nokusebenza kakuhle kwinkqubo esekwe emanzini.
Cebisa: Iindidi ezahlukeneyo zeplastiki kunye nee-inki zokuprinta.Ipeyinti yokuhombisa esisiseko samanzi, ipeyinti esekwe kwi-solvent, ipeyinti yeshishini, i-powder coating.
Nceda ujonge i-TDS yePigment Yellow 180 ngezantsi.
I-Pigment Yellow 155 / CAS 68516-73-4
I-Pigment Yellow 155 yimpuphu eqaqambileyo emthubi, enokumelana okugqwesileyo, nokusebenza kakuhle kwinkqubo esekwe emanzini.
Cebisa: Iindidi ezahlukeneyo zeplastiki kunye nee-inki zokuprinta.Ipeyinti yokuhlobisa isiseko samanzi, ipeyinti yoshishino.
I-Pigment Yellow 154 / CAS 68134-22-5
I-Pigment Yellow 154 yi-pigment eluhlaza okwesibhakabhaka, enokumelana okugqwesileyo, kunye nokusebenza kakuhle kwinkqubo esekwe emanzini.
Nceda ujonge i-TDS yePigment Yellow 154 ngezantsi.
I-Pigment Yellow 151 / CAS 31837-42-0
I-Pigment Yellow 151 yi-pigment eluhlaza okwesibhakabhaka, enokumelana okugqwesileyo, kunye nokusebenza kakuhle kwinkqubo esekwe emanzini.
Nceda ujonge i-TDS yePigment Yellow 151 ngezantsi.
I-Pigment Yellow 150 / CAS 68511-62-6
I-Pigment Yellow 150 yi-pigment eyomeleleyo emthubi enokukhawuleza okugqwesileyo ekukhanyeni nakwimozulu, ngakumbi kwimithunzi enzulu.Inokukhanya okukhanyayo njenge-organic pigment.Njengoko ineempawu ezihamba kakuhle kakhulu kwiipeyinti, ingasetyenziselwa kwiindawo eziphezulu ze-pigment (i-25-30% ye-pigment ehambelana ne-binder eqinile) ngaphandle kokuchaphazela iglosi.Kufuneka kukhunjulwe ukuba ukuchasana ne-alkali enamandla kakhulu akwanelisi.Nceda ujonge i-TDS ye-Pigment Yellow 150 ngezantsi.
I-Pigment Yellow 110 / CAS 5590-18-1
I-Pigment Yellow 110 yi-pigment ebomvu etyheli, enozinzo olugqwesileyo lokuqhuba, isakhono esilungileyo sokusasaza, ukukhanya okuphezulu, ubushushu obubalaseleyo kunye neempawu ezibalaseleyo zokukhawuleza.
Icetyiswa kuzo zonke iipeyinti, iplastiki, iFayibha kunye nee-inki zokuvala, ii-inks ze-UV.Kucetyiswa ukuba amanzi asekelwe kwi-inki kunye noshicilelo lwe-textile.Ipeyinti yokuhombisa esisiseko samanzi, ipeyinti yokuhombisa isiseko se-solvent-base, ipeyinti yefektri, ukutyabeka komgubo, ipeyinti yemoto, icoil, ipeyinti yelaphu.
Nceda ujonge i-TDS yePigment Yellow 110 ngezantsi.
I-Pigment Yellow 83 / CAS 5567-15-7
I-Pigment Yellow 83 yi-pigment ebomvu etyheli enokumelana okuhle kokubini kunye nezinyibilikisi, ukumelana nobushushu.
Ncoma: I-inki esekwe emanzini, i-inki yokucima.
Icetyiselwe i-inki esekwe kwi-solvent, ipeyinti yeshishini, ipeyinti yokuhombisa, icoil coil, ushicilelo lwelaphu kunye nePVC, RUB, EVA,PE.
Ipeyinti yokuhombisa esisiseko samanzi, ipeyinti yokuhombisa isiseko se-solvent-base, ipeyinti yefektri, ukutyabeka komgubo, ipeyinti yemoto, icoil, ipeyinti yelaphu.
Ujonga i-TDS yePigment Yellow 83 ngezantsi.
I-Pigment Yellow 74 / CAS 6358-31-2
I-Pigment Yellow 74 yimthubi eqaqambileyo ene-opaque ephezulu kunye nokumelana okuhle kakhulu.
Ncoma: I-inki esekwe ngamanzi, iipeyinti ezisekwe emanzini kunye noshicilelo lwelaphu.Kucetyiselwe ipeyinti yokuhombisa esekwe emanzini kunye nee-inki zeNC, ii-inki ze-offset.Ipeyinti yokuhlobisa isiseko samanzi, ipeyinti yokuhlobisa isiseko se-solvent, ipeyinti yoshishino, icoil coil.
Nceda ujonge i-TDS yePigment Yellow 74 ngezantsi.
I-Pigment Yellow 65 / CAS 6528-34-3
I-Pigment Yellow 65 i-pigment ephuzi kunye nomthunzi obomvu obomvu, kodwa umthunzi obomvu uhlwempuzekile kune-Yellow HR, kwaye inokumelana kakuhle ne-solvents, ukukhanya okulungileyo, ukuxhathisa okulungileyo kwe-asidi, ukuxhathisa okulungileyo kwe-alkali kunye nokufihla okuphezulu.
Cebisa: I-inki esekwe emanzini, iipeyinti ezisemanzini, iipeyinti zamashishini.Ipeyinti yokuhlobisa isiseko samanzi, ipeyinti yokuhlobisa isiseko se-solvent, ipeyinti yoshishino, icoil coil.
Nceda ujonge i-TDS yePigment Yellow 65 ngezantsi.
I-Pigment Yellow 17 / CAS 4531-49-1
I-Pigment Yellow 17 yi-pigment eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nokucwebezela okucacileyo kunye nokuqaqambileyo.
Ncoma: Ii-inks ze-Offset, i-NC, ii-inks ze-PA, ushicilelo lwe-textile, i-PVC, i-RUB.
Nceda ujonge i-TDS yePigment Yellow 17.